Mitombo be ireo voan'ny Covid 19 Mety hohenjanina ny fepetra
Mirongatra ny valanaretina 6 maty, 265 voa tao anatin’ny 4 andro
Mihaodihaody ny Covid19 Hikatona ny sampan-draharaha fanaovana « passeport » anio
Dr Fidy Bariniaina “Tsy hihiboka mandrakizay isika, aleo miaro tena tsara”
Fiarahamonina Be loatra ny goragora ka miparitaka ny valanaretina
Ady amin` ny coronavirus Mila fitoniana sy firaisankina
Tafiakatra 230 ireo olona voan’ny coronavirus ho an’I Madagasikara hatramin’ny nahatafidirany teto. Tsy mitsaha-mitombo, satria tranga 18 be izao indray no notaterin’ny Pr Vololontiana Hanta.
Tao anatin’ny fitiliana miisa 210 vaovao natao no nahitana ireo 18 ireo, izany hoe 8,5% tamin’ireo notiliana izany no voa, izay tena ambony izany. Tao anatin’ny 72 andro izany dia 44 ny tranga raha ampiana ny 6 tranga ny 12 mey sy ny 20 ny 13 mey ny isa omaly. Ny olona 13 voa dia fitiliana vaovao mihitsy, ary ny 5 kosa "contre-test" tamin'ireo 67 noresahin'ny OMS ka naverina natao fitiliana noho ny ahiahy, ka ny 55 amin’ireo no efa tena natao, ary misy kosa ny famerenana ho an’ny 11 noho ny tsy fihetezana hafa, ary ny 1 kosa dia ilay vehivavy efa namoy ny ainy, izay nambara fa “negatif” na niiba ny valin’ny fitiliana ary aretina hafa no nahafaty azy. Ny 3 amin'ireto 5 ireto dia avy any Toamasina ary ny 2 ambiny kosa dia avy eto an-drenivohitra. Ho an’ny vokatry ny fitiliana vaovao kosa dia 11 tany Moramanga ary ny 2 dia avy ao Toamasina. Nisy iray vaovao sitrana nampiakatra ny isa manontolo ho 108, ary 122 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana izao.
HIHAMAFY NY FEPETRA…
Amin’ny faran’ity herinandro ity no ho tapitra ny 15 ho an’ny hamehana eto amin’ny tany sy ny firenena, izany hoe hisy fanapahan-kevitra vaovao indray andrasana. Raha zohiana amin’ny zava-misy, dia hitohy ny hamehana ara-pahasalamana. Ny 7 mey teo tany Toamasina ny Filoham-pirenena no nilaza fa raha tsy mitandrina isika ka tsy voafehy io, dia hiroso amin’ny fepetra mafy kokoa, ka andrasana izay ho fanapahan-kevitra horaisin’ny fanjakana eo anatrehan’ny zava-misy. Mety ho samihafa arakaraka ny faritra sy ny taham-pahavoazana ny fepetra hivoaka. Ny azo handravonana azy dia tsy voafehy ny fipariahan’ny coronavirus, ary mihazakazaka ny taham-pahavoazana, ka mila ampitomboina ny fitandremana sy fahamailoana ho an’ny olom-pirenena.